Carrefour waxay bedeshay astaanteeda iyo qaab qoristeeda | Abuurista khadka tooska ah
Jawharad | | logos
In yar ka hor waxaan daawanaayay TV-ga iyo mid ka mid ah taxanaha xayeysiinta aan dhamaadka lahayn, waxaan ku arkay xayeysiis soo jiitay dareenkeyga, ma ahan sababihiisa darteed, laakiin sababta oo ah isbedel in ka dhacay isaga logo.
Xayeysiiska laftiisa ayaa ka yimid Dukaamada waaweyn ee Carrofour, Waxaan imid kombuyuutarka oo waxaan bilaabay inaan raadiyo macluumaad ku saabsan mowduuca, laakiin waxba kamaan helin, markaa waxaan aaday bogga rasmiga ah halkaasna waxaan ka helay kaliya isbeddelka lagu sameeyay thumbnail ee buugaagtooda iyo buugga kor ku xusan ee pdf ee aan furay si aan u helo sawirka kore oo isbarbardhigaya astaamaha iyo astaamaha labadaba.
Waqtigan xaadirka ah isbedelka laguma sameynin shabakada waxaana lagu arki karaa oo kaliya xayaysiisyada telefishanka.
Kuwaas isbedelada ayaa ka kooban a soo koobidda qaababka gudaha logo oo aan horeba halkan ugaga hadalnay farriintiisa qarsoon iyo sidoo kale midda suugaanta qoraalka kaas oo umuuqda mid waxyar kabadan kana wareegsan hada waxayna isticmaalaan xarafka yar "c" halkii ay ka isticmaali lahaayeen xarfaha kore sidii hore. Isbedelka ugu caansan waa kan midab leh, tan iyo markii ay ka soo gudbeen casaan iyo buluug illaa guduud iyo oranjo, isku dhafan oo ku jira isbeddel sanadkan.
Hadda waxaan u baahanahay inaan booqdo xarunta Carrefour si aan u arko isbeddelka boodhadhkooda, laydhadhkooda iyo calaamadaha alaabtooda.
Waxaan jecelahay isbedelka, adiguna
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Carrefour waxay bedeshay astaanteeda iyo qaab qoraal ahaan
Laakiin kaliya maahan beddelka midabada ... laakiin meesha ay ku taal! si fiican u fiiri ... hada waa la rogay !!!
Anigu si gaar ah uma jecli gabi ahaanba ...
kii hore ayaa kafiicanaa kan kale mid qariib ah oo fool xun.
Oooooh, Carrefour, hadda halkii aan ka heli lahaa Carrefour waxaan kuugu yeedhi doonaa meeraha Carrefour macno ahaan
qaali! Loguito, ku jiri Deg deg deg ah qaali. Hadana caqabado la'aan ma soo dejisan karo inkasta oo ay is bedeshay! Sidan kuma sii ahaan karo
Maqaal aad u wanaagsan! Runtii, waxaan aqrinayay mareegtadaada waxaanan u maleynayaa inaad wadaagto waxyaabo tayo wanaagsan leh. Waxaan layaabay inaadan wax faallo dheeraad ah haynin, shaqo fiican.
Ku soo jawaab CabanasChilenas.com